PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-03-25 - Uyagcagcelwa ngesonto okamaskandi
Uyagcagcelwa ngesonto okamaskandi
Uthi kuzobe kuvumeleke wonke umuntu, kufinywa ngendololwane
Ilanga langeSonto - 2018-03-25 - Ezikaqedisizungu - MTHOBISI SITHOLE mthobisis@ilanganews.co.za
UTHATHE isinqumo sokugcagcelwa umculi kamasikandi ayeke ukuchoma ngezinto ezingamyisi ndawo, ukuze kuhlonipheke amaciko omculo wesintu.
Usgwebo sentambo Khoza, wasobuka, empangeni, uzobe egcagcelwa ngesonto mhla lulunye kumbasa (April). Uthi okumsukumise phansi wukuthi omasikandi bathanda ukuchoma kakhulu ekubeni bengaganiwe, okuyinto esemqoka.
Utshele ILANGA Langesonto ukuthi akubanga yisinqumo esilula ukuganwa ngoba bekudingeka ukuba akhethisise kwazise bona bengabaculi, banenselelo enkulu yokuthi akulula ukusheshe uthole umuntu omthandayo.
“Sekuyisikhathi sokuba ngikhule manje njengoba kwakuyinhloso yami ukuvusa umuzi kababa. Ngithe angime ngokuthenga izimoto nokuthanda ukuchoma okungenasidingo ekubeni ngisahlalelwe yicala lokuganwa.
"Ngibone kukuhle ukuba ngivikele isithunzi sikamasikandi ngoba phela lezi zinsizwa esiyibambe nazo, azithandi ukuganwa,” kusho usgwebo.
Uthi uzogcagcelwa ngunkz Bongiwe Sibisi wasenondweni, enquthu. Uveze ukuthi le ngoduso yakhe yiyona encane yokugcina kwezintathu anazo. Uthi uzoshada yona okwamanje ngenxa yezizathu zakhe angathandanga ukuzidalula.
“Kubalulekile ukuthatha umuntu omaziyo ukuthi uphumaphi nokuthi ubhekephi.
"Lezi ezinye izingoduso zami azinankinga nokuthi ngizoshada nalona omncane,” kusho usgwebo.
Uthi baqale ukuthandana nowakwakhe ngonyaka wezi-2008. Utshele leli phephandaba ukuthi okunye okumchaze ngale ntokazi wukuthi kayithandi nokuthatha ucingo lwakhe nokufuna ukwazi ukuthi ukhuluma nobani, ngasiphi isikhathi ngoba bona bengabaculi basebenza ngabantu abaningi okungabalandeli abafona nsuku zonke.
“Ngithi wonke umuntu wamukelekile emcimbini ngoba mina ngingumuntu ophila nabantu. Ngikusho lokho ngoba kunabantu abaningi abangixhasile kulo mcimbi wami.
"Kuzobe kufinywa ngendololwane, umphakathi awuphelele impela,” kusho yena.
Uthi izinsizwa zizobe zibhudle izinduku kanti namaciko kamasikandi azobe ekhona eyomeseka, okubalwa kuwona ubahubhe, ujaivazimnike, ugadla Nxumalo nabanye.
UMCULI kamasikandi, usgwebo Sentambo, uzoshadelwa ngesonto elizayo kubo kwesakwabiyela, obuka, empangeni.